Ukusetyenziswa Formwork Steel
Inkampani ye-LIANGGNOG inamava ayiliweyo okuyila kunye netekhnoloji yokuvelisa yentsimbi formwork esetyenziswa kakhulu kwifom yebhulorho, i-cantilever eyenza umhambi, itroli yetreyini, isantya esiphezulu sohlobo lukaloliwe, ifom yesikhululo sangaphantsi, umqadi we-girder njalo njalo. I ...
Inkqubo yofakelo lwe-hydraulic auto-climbing formwork
Hlanganisa i-tripod: beka iziqwenga ezibini malunga neebhodi ezingama-500mm * ezingama-2400mm kumgangatho othe tyaba ngokungqinelana nesikhewu, ubeke i-tripod buckle ebhodini. Izembe ezibini ezinxantathu kufuneka zilingane ngokupheleleyo. Isithuba se-axis ngumgama osembindini ...
LIANGGONG fracturing oluzenzekelayo formwork
Imibuliso yamaxesha onyaka kunye neminqweno emihle kunyaka omtsha, i-LIANGGONG ikunqwenelela ishishini eliyimpumelelo kwaye ungene kwilishwa. Inkqubo ye-hydraulic auto-climbing yindlela yokuqala yokukhetha udonga oluphezulu lwe-shear yokwakha, isakhelo sesakhelo setyhubhu, ikholamu enkulu kunye ne-cast-in-plac ...